Disposable Medical Face Nkpuchi, Nje Virus, Sampling tube - Limeng
E hiwere ụlọ ọrụ ọgwụ nke Shandong Limeng na 1993, ugbu a ọ nwere ụlọ ọgwụ ọdịnala nke ndị China, nri nlekọta ahụike, ụlọ ọrụ mmebe ahụ, ụlọ ọgwụ na ngwa ọrụ, ụlọ nyocha ọgwụ na ụlọ ọgwụ ọgwụ ndị China, ha niile agafeela. na otu narị puku na-asachasị ogbako akwụkwọ. The ụlọ ọrụ mgbe niile na-arapara n'ahụ mmepe echiche nke elu-tech nghazi, na ụlọ ọrụ-mahadum-nnyocha imekọ ihe ọnụ. Ọ nwere otu ọkachamara R&D otu, teknụzụ ọkpụkpụ na technicians. The ụlọ ọrụ na-agbalị ịzụlite ika atụmatụ, na ika "Limeng" e ọdịda dị ka Municipal Famous Trademark nke Jinan na 2012.
Kpọtụrụ anyị maka ngwaahịa ndị ọzọ
Shandong Limeng ọgwụ Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ mgbe niile na-arapara n'ahụ mmepe echiche nke elu-tech nghazi, na ụlọ ọrụ-mahadum-nnyocha imekọ ihe ọnụ.
Ozi R & D
Ruru eru R&D engineer ga-ahụ maka gị alo ọrụ na anyị ga-agbalị kasị mma anyị na-izute gị chọrọ.
Ihe ngwọta anyị nwere ụkpụrụ nzere ntozu nke mba maka ahụmịhe, nke kachasị mma, ihe bara uru ...
Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ ahụike na ebe a na-ahụ maka ihe karịrị 2,000 square mita, ụlọ ọrụ nlekọta ahụike na-ahụ maka nlekọta ahụike nke mita 10,000, na ụdị usoro ọgwụgwọ gụnyere capsules, tablet, granules and powder etc.
102020 / Ọkt
Na Machị 6, 2019, Shandong Limeng mere emume maka ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ. Ndị mmekọ Limeng sonyere na mmemme ahụ. Iji gbasaa nrụpụta ọrụ ụlọ ọrụ ma baa ọgaranya karịa ọrụ, Limeng Pharm na-etinye nde pam 1.2 ka ọ zụta ala 10. Ọhụrụ alaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe wil ...
Na July 28, 2020, ngalaba dị mkpa nke Shandong Provincial Food and Drug Administration nyere ikike maka ndị nnwale nke atọ, SGS, enyochala usoro njikwa njikwa ọgwụ Limeng, nke dabere na sistemụ njikwa HACCP mba ụwa. The oru ngo nke nri Mmeju, dai ...
Na-alụ ọgụ megide ọrịa ahụ ọnụ
N’uhuruchi Ememe Oge opupu ihe ubi nke China, COVID-19 gbasara n’ụzọ ike. Ọrịa dị otú ahụ nke metụtara onye ọ bụla akpatarala ọtụtụ nde mmadụ nnukwu nsogbu. Kemgbe ntiwapụ ahụ, Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. na-eme mgbalị niile iji mepụta na dona ...